तपाईंको मूल्यको धारणा के हो? | Martech Zone
तपाईंको मूल्यको धारणा के हो?
मङ्गलबार, अक्टोबर 18, 2011 बिहीबार, अक्टुबर 27, 2011 Douglas Karr
कहिलेकाँही मलाई लाग्छ कि मैले २ बर्ष भन्दा पहिले आफ्नै ब्याटेरस सुरु गरें (तर मसँग यो अरू कुनै प्रकारले हुने छैन)। व्यापार सुरू गरेको केही समय पछि मलाई थाहा थियो कि म समस्यामा छु किनकि मसँग उत्तम उत्पाद छ तर यसलाई बेच्न कसरी स .्केत नै छैन। मलाई कत्तिको समय लाग्छ भनेर अनुमान गरेर र मैले मेरो प्रति घण्टा दरमा गुणा गरेर एक भाव सेट गर्छु। नतिजा के हो भने चीजहरूले मलाई take पटक सम्म लिन्छन् र म खाना टिकटहरूमा गर्नुहुने भन्दा कम बनाउँदै थिएँ ... र कुनै निन्द्रा पाइनन्।
मैले भेटेको थिएन म्याट नेटलटन र केहि बिक्री कोचिंग भयो जुन मैले मेरो तरिकाहरूको त्रुटि देखेको थिएँ। I मेरो सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दै थियो, अनुमति भन्दा मेरो अनुमान द्वारा प्रस्तुत मेरो ग्राहक सेवा को मूल्य छ। म दुई फरक ग्राहक साइटहरु मा काम गर्न सक्दछु र उनीहरुका इनबाउन्ड मार्केटिंग प्रयासहरु लाई फर्काउन सक्छु, र अरुले सयौं डलर कमाउन सक्छ र अर्कोले सयौं हजारौं डलर बनाउन सक्छ। समान काम ... दुई भिन्न मानहरू।
मैले गरेको व्यवसायमा त्यो परिवर्तनले मेरो व्यापारलाई आसमान्यो। मसँग अझै धेरै साना ग्राहकहरू छन्, तर त्यो ठूला ग्राहकहरु द्वारा ओडारिएको छ मेरो सेवालाई बढी मूल्य दिनुहोस् किनभने तिनीहरूको संगठन मा तल्लो लाइन प्रभाव को। विडंबना यो हो कि अब हामीसँग भएका साना सments्लग्नताहरू वास्तवमै सबैभन्दा गाह्रो छ किनकि प्रतिफलमा १०% वृद्धिले हाम्रो मासिक संलग्नतालाई पनि समेट्न सक्दैन!
कसैले मलाई अर्को दिन सोध्यो के मलाई लाग्छ कि यो यो राम्रो विचार हो खुला साइटमा उनीहरूको साइटमा सेवाहरूको बजार मूल्य। उनीहरूले सोचे कि यो पारदर्शिताको ठूलो चिन्ह हो र उनीहरूको सम्भावनाको साथ विश्वास जगाउँदछ। म भन्छु यो गर्दैन। मैले फिर्ता ट्वीट गरे कि जब तपाईं आफ्नो मूल्य प्रकाशित, मूल्य अब एक सुविधा हो कि तपाइँको सबै प्रतिस्पर्धा मा तपाइँ संग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तपाइँको मूल्य प्रकाशित गर्न समस्या भनेको म र मेरो प्रारम्भिक उद्धरण जस्तै समान हो। यसले तपाईंको सेवाको मूल्यलाई ध्यान दिदैन संभावनामा.
यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने 99 डिजाइनहरू, यो काम गर्दछ। तपाईं केवल अन्य कम लागत सेवाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो केवल मेरो केही ग्राफिक डिजाइनर सहयोगीहरूको लागि बोल्न सकिन्छ कि लोगोले कम्पनीमा ल्याउन सक्ने मानको मूल्य बुझ्नुभएमा के लागत लाग्दछ। नयाँ लोगोहरू छन् परिभाषित कम्पनीहरु! एक सस्तो लोगो सस्तोको रूपमा लिन सकिन्छ - यो प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीसँग। एक गुणवत्ता लोगो कि धारणा परिवर्तन गर्न सक्दछ र धेरै अधिक उद्योग ध्यान प्राप्त गर्न।
तपाईंको मार्केटिंग धारणा को एक बाहिरी प्रदर्शन हो तपाईं तपाइँको ब्रान्ड छ। यदि मानको अंश मूल्य हो भने, सबै प्रकारले, ब्रान्डको नाममा "सस्तो" थप्नुहोस् र त्यहाँ केही प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण गर्नुहोस्! जे होस्, यदि तपाईंले ल्याउनुभएको मूल्य हो भने अनुभव, बुद्धिमत्ता, आदर्श, परिष्कार, र नतीजाहरू ... साइटबाट मूल्य राख्नुहोस् र तपाईंको सम्भावितहरूले मूल्य निर्णय गर्न दिनुहोस् तपाईं ल्याउदै हुनुहुन्छ। जब हामी एक ग्राहकलाई अर्को ग्राहकको करारको आकारमा १० पटक साइन गर्छौं, हामी दस पटक कडा परिश्रम गरेर यसलाई मात्रा तोक्दैनौं। हामी १० पटक परिणामहरू प्राप्त गर्ने कोशिस गरेर यसलाई प्रमाणित गर्छौं, वा एकै दशौं पटक समान परिणामहरू प्राप्त गर्दछौं।
तपाईंको मार्केटिंग र बिक्री दृष्टिकोणमा सावधान हुनुहोस् जब यो आउँदछ मूल्य बनाम मूल्य। तिनीहरू उस्तै छैनन्! मूल्य भनेको तपाईले कति शुल्क लिनुहुन्छ, मूल्य भनेको तपाईलाई कत्ति मूल्यवान छ ग्राहकलाई। तपाईको मार्केटिंगले तपाईले ल्याउने मूल्यलाई बढावा दिनुपर्दछ, तपाईको लागत के होईन। र यदि तपाईंको बिक्री टोलीले तपाईंलाई गुनासो गरेको छ कि तिनीहरूले तपाईंको मूल्य निर्धारणको आधारमा बिक्री गुमाइरहेका छन् भने, नयाँ विक्रेताहरू प्राप्त गर्नुहोस्। यसको मतलब तिनीहरू बुझ्दैनन् र संभावनालाई सहयोग गरिरहेका छैनन् कि तपाईंले ल्याउनुभएको मूल्य बुझ्न।
सिडेनोट: यस संकटको समयमा, मँ थप्न चाहान्छु कि हाम्रो रोजगार प्रणालीमा पनि यस्तै समस्या छ। व्यक्ति प्राय: उनीहरूको आधारमा उठाइको आशा गर्दछन् काम प्रयास, जीवन स्तरवा जीवन लागत मा परिवर्तन। त्यो उनीहरूको आफ्नै मूल्य हो। ती मध्ये कुनै पनि कम्पनीमा फरक पर्दैन। त्यस्ता आधारमा, केहि बढि बढि आफ्नो मान ... र अधिक धेरै यसलाई कम महत्व दिनुहोस्। मेरो सम्पूर्ण क्यारियरमा (नौसेना बाहिर), म इमानदारीतासाथ कहिल्यै उठाउनको लागि अस्वीकार भयो। यो किनभने कुरा गर्नुको सट्टा थियो सीओएलए वा उद्योग मानक, मैले कुरा गरें परिणाम र नाफा। यो कम्पनीको लागि कुनै दिमाग थिएन कि मलाई २०% बढाउन दिनुहोस् जब म तिनीहरूलाई बचत गर्दै थिएँ वा तिनीहरूलाई दुई गुणा ठूलो बनाउँदै थिए।
उही ईमेल मार्केटिंग पेनहरू ... १० बर्ष पछि।
के तपाई बाथरूमबाट टेक्स्ट गर्नुहुन्छ?
अक्टोबर 19, 2011 बिहान 11:12 बजे
म थप सहमत हुन सकिन। डेढ वर्ष अघि मैले एलन वेइसका धेरै पुस्तकहरू भेटें जसले मलाई मेरा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्दा मैले गरेका सबै गल्तीहरू महसुस गराए। जसरी उनी यति उपयुक्त रूपमा भन्छन्: "कम परामर्श शुल्कको मुख्य कारण कम आत्म-सम्मान हो"। सेवाहरूमा, यसले समय बेच्नको लागि *बिल्कुल कुनै अर्थ* राख्दैन, मानौं कि हामीले ग्राहकलाई ल्याएको मूल्य बिताएको समयसँग सम्बन्धित थियो। यदि ग्राहकले स्पष्ट रूपमा प्राप्त मूल्यसँग मूल्य बराबर गर्छ भने, त्यसपछि सबै सबैको लागि राम्रो छ। कोही पनि विचलित हुँदैनन्। यसमा थप्नुहोस् कि यसले एक तरीकाले थप उत्पादक संलग्नता सम्बन्धहरू सिर्जना गर्दछ, किनकि दुबै पक्षहरू खुसी छन्।
व्यक्तिगत रूपमा, म कुनै ग्राहकलाई होईन भन्नु भन्दा धेरै प्रबन्ध गर्न रुचाउँछु...
अक्टूबर २०, २०१ at २:19० अपराह्न
ठोस सल्लाह, जैक!
धेरै सत्य हो - तपाईंका बिन्दुहरू साँच्चै मसँग प्रतिध्वनित भयो किनकि मैले तपाईंले गर्नुभएका पाठहरू सिकिरहेको छु, र त्यस्तै तरिकाले। तपाईको पाइला पछ्याएर मलाई केहि वर्ष सडकमा तपाईले जस्तै उस्तै खुट्टामा राख्नुभयो भने नराम्रो कुरा होइन! एक धेरै अन्तरदृष्टि लेख को लागी धन्यवाद।